मियामा मोटर्सका अध्यक्ष समिर यादव भन्छन : इलेक्ट्रिक स्कुटर अव अनिबार्यता नै भइसक्यो । | Automotive News Nepal
मियामा मोटर्सका अध्यक्ष समिर यादव भन्छन : इलेक्ट्रिक स्कुटर अव अनिबार्यता नै भइसक्यो । ९ असोज, २०७६
मियामा स्कुटर गत वर्ष नेपालमा लन्च गर्नुभएको थियो । मियामाको एक वर्षको अवधि कस्तो रह्यो ?
बजारमा प्रतिस्पर्धा छ । तर अन्य ब्रान्ड भन्दा मियामा स्कुटरलाई धेरैले रुचाइरहनु भएको छ । इलेक्ट्रिक स्कुटर भएकाले धेरैलाई चासो छ र हामीलाई पनि बुझाउन सहज भएको छ । हामीले राम्रो संख्यामा बिक्री गर्न सफल भयौ ।
एक वर्षमा कति जति स्कुटर बिक्री गर्नुभयो ? कस्ता स्कुटर छन् ?
हामीले एक वर्षको अवधिमा २ सय ४० भन्दा बढी स्कुटर बेच्न सफल भयौ । हामीसँग १ लाख ४९ हजार देखि १ लाख ९६ हजार रुपैयाँ सम्मका स्कुटर छन् ।
राम्रो छ । जति पनि आउनुहुन्छ, उहाँहरु खुसी भएको बताउनु हुन्छ । स्कुटर ठोकिएर वा कुनै पार्ट्स हल्लिएर मर्मतका लागि आउदा आफ्ना प्रतिक्रिया राम्रो भएको बताउनु हुन्छ ।
मियामा कस्तो ब्रान्ड हो ?
एक जना जापनिजले मियामा कम्पनीका लागि मोटर र कन्ट्रोलर बनाउनु हुन्छ । उहाँले नै कम्पनीको नाम पनि मियामा राख्नुभएको हो । त्यसपछि चीनमा ज्वाइन्ट भेन्चरको रुपमा यसको उत्पादन गरिएको हो । त्यसपछि फेरि जापान पठाएर परीक्षण गरे पश्चात मात्र यो बजारमा आउछ । त्यसैले यसलाई राम्रो मानिन्छ ।
इलेक्ट्रिक स्कुटर पहिले पनि आएका थिए । तर विभिन्न कमजोरीका कारण बजार लिन सकेनन् । फेरि नयाँ प्रविधिका साथ बजारमा आउने क्रम जारी छ । अबका दिनमा यी स्कुटरले बजार लिन्छन् भनेर विश्वस्त हुन सकिन्छ ?
विश्वस्त मात्र होइन, अब अनिवार्यता नै भइसक्यो । पहिले आएका स्कुटर कुनैमा ब्याट्री खराबी, कुनैमा पार्ट्स खराबी आदि समस्या पाइयो । विशेष गरी चीनमा उत्पादन भएका त्यस्ता स्कुटरमा समस्या देखिएको थियो । नेपाल जस्तो सानो बजारमा केही समय बिक्री गरेर पछि बन्द गर्ने चलन भएको थियो । तर अहिले त धेरैको सामान खारिएर आएको छ । हामीले त झन् ५ बर्ष भन्दा बढी अध्ययन पश्चात मात्र मियामा ब्रान्डलाई नेपालमा लिएका हौं । त्यसैले नेपालका लागि यो सुहाउदो छ ।
तपाईंहरुसँग कति रेन्जका स्कुटर छन् ?
हामीसँग लिड एसिड र लिथियम आयोन दुवै खाले ब्याट्री भएका स्कुटर छन् । लिड एसिडमा १ सय किलोमिटर र २ सय किलोमिटरमा छ । ४ वटा मोडल १ सय किलोमिटर र एउटा २ सय किलोमिटरमा छ । लिथियममा १ सय २५ किलोमिटर छ । लिथियम आयोनको वारेन्टी २ वर्ष र लिड एसिडको १ वर्ष छ । माइलेजमा यी स्कुटरमा कुनै गुनासो आएको छैन ।
बिक्री पछिको सेवाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसका लागि कस्तो व्यवस्था गर्नुभएको छ ?
यसका लागि पार्ट्सको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । स्कुटरको कुनै पार्ट्स बिग्रियो भने नयाँ पार्ट्स राख्दा स्कुटर पनि नयाँ हुन्छ । त्यसैले हामीले पार्ट्सको उपलब्धता प्रशस्तै गराएका छौ ।
यस्ता स्कुटरको रिसेल भ्याल्यु कस्तो हुन्छ ?
स्कुटर किनेर तुरुन्तै बेच्दा त फाइदा हुँदैन । तर किनेको केही वर्षपछि बेच्दा भने फाइदा छ । किनभने यो अवधिमै प्रशस्तै पैसा बचिसकेको हुन्छ । विद्युत प्रयोग गरिने भएकाले इन्धनमा लाग्ने खर्च पहिले नै जोगिएको हुन्छ । ब्याट्री परिवर्तन गर्दा नै स्कुटर नयाँ जस्तो हुन्छ ।
काठमाडौं - चीन सरकारले चक्रपथको कलंकी-महाराजगन्ज ८ लेन विस्तार गरिदिने भएको छ ।...
लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन अझै ठप्पै
काठमाडौँ - सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को नयाँ आवेदन अझै ठप्पै छ । सेवाग्राह...
सकियो बजाज ग्रान्ड एक्सचेन्ज मेला, सोरुममा भने अझै थप
काठमाडौं – बजाज मोटरसाइकलको नेपालका लागि अधिकृत बितरक हंसराज हुलास चन्द एण्ड कम्...